Britain: Iran waa lala heshiin karaa - BBC Somali
Britain: Iran waa lala heshiin karaa
Image caption Shirka wadahadalka nukliyeerka Iran ayaa dib uga dhici doona Geneva.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain William Hague, ayaa BBC u sheegay in lala galo heshiis Iran oo ku saabsan barnaamishkeeda nukliyeerka ay suurto gal tahay.
Laakiiin wuxuu sheegay in wadahadalada ay adag yihiin. Mr Hague ayaa sheegay in reer galbeedka ay ku dadaali doonaan farqiga yar ee u dhaxeeya labada dhinac, markii wadahadalka dib loo bilaabo toban maalmood gudaheed.
Madaxweynaha Iran, Xasan Ruuxaani, ayaa mar kale ku celiyay in xaqa uu waddankiisa u leeyahay inuu isticmaalo teknoolajiyada, oo ay ku jirto tayeenta uraniumka ay tahay mid aan laga hadli karin.
Shanta waddan ee xubinaha joogtada ka ah Golaha Ammaanka iyo Jarmalka, ayaa Iran ka doonaya inay dhinto tayeenteeda uraniyamka oo u suurto galin kara inay yeelato hub nukiliyeer ah. Tehran ayaa doonaysa in laga dabciyo cunaqabataynta la saaray.